UNDER 18 (သို့ ) THUMB DOWN အပိုင်း(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » UNDER 18 (သို့ ) THUMB DOWN အပိုင်း(၁)
UNDER 18 (သို့ ) THUMB DOWN အပိုင်း(၁)
Posted by nigimi77 on Jan 22, 2011 in Creative Writing | 22 comments
ကဲ ဘယ်လိုလဲ ?
အချိန်ကား 2016 ခုနှစ်။ ရန်ကုန်မြို့ တွင်း တနေရာ….။
MINI STORE တခု၏ အရှေ့ နားတွင် လူငယ်ကောင်လေးတစ်ယောက် မယောင် မလည် လမ်းလျှောက်နေသည်။ သူ့ မျက်လုံးများက ဂဏာ မငြိမ်။ မေးစိကို ပွတ်လိုက် ဆိုးဆေးကျို့ တို့ ကျဲတဲ ဆံပင်ကို ထိုးဖွလိုက် နှင့် အကြံထုတ်နေသည်။ တခဏနေသော် သူ့ ကိုယ်သူ ယုံကြည်စိတ်ချသော အသွင်နှင့် ဆိုင်ထဲသို့ဝင်သွားတော့သည်။
အရောင်းကောင်တာတွင် ကျောင်းပိတ်ရက် PART TIME အနေဖြင့် နေ့ ဆိုင်းညဆိုင်း မိမိအားလပ်ချိန်ကို အချိန်မဖြုံးပဲ အချိန်ပိုင်းဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ တဖက်ကကြည့်မည်ဆိုလျင်လဲ မိဘထံမှ လက်ဖြန့် တောင်းရမည့် ကျူရှင်စားရိတ်၊ အသုံးစားရိတ်၊ အ၀တ်အစားဖိုး၊ PHONE BILL တို့ အား ကာမိစေသည်။
….ဆေးလိပ်တစ်ဘူးပေးပါ……။ အရောင်းကောင်တာမှ လူငယ်သည် ဆေးလိပ်ဝယ်ယူမည့် ကောင်လေး၏ မျက်နှာအား မသိမသာ အကဲခေတ်လိုက်သည်။
သံသယဖြစ်စရာပင်…။ ရုပ်က နဲနဲ ခန့် မှန်းရခက်နေသည်။ ၂၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထင်ရသည်။ ခက်တော့နေပြီ။ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ…..။
ယဉ်ကျေးစွာဖြင့်ပင်…..ကျေးဇူးပြုပြီး မှတ်ပုံတင် ခဏကြည့်ခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျာ…….။
ထိုလူငယ်သည် အိတ်ထဲ လက်နှိုက်သလို ပြန်ထုတ်လိုက် ပြန်ချလိုက် အမြီးမြှောက်လိုက် ချီးပေါက်လိုက်နှင့်……ဟာ ပြသာနာပဲ…။ ကျွန်တော့် ပိုက်ဆံအိတ် အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီထင်တယ်…။
ခဏနော် ပြန်ယူပြီးလာခဲ့မယ်…ဟု ဆိုပြီး သုတ်ချေတင်တော့သည်….။ ကောင်တာမှ လူငယ်သည် မပွင့်တပွင့် ပြုံးလိုက်ပြီး လုပ်လက်စ အလုပ်ကို ဆက်လုပ်နေတော့သည်။
မှန်ထဲကို အကြိမ်ကြိမ်ကြည့်ကာ….အင်း… မနေ့ ညက မှတ်ပုံတင် မပြပဲ CLUB ထဲကို ခိုးဝင်တဲ့ အသက်မပြည့်တဲ့ ကောင်လေးတွေ စခန်းကို ရောက်လာလို့တညလုံး အလုပ်ရှုပ်ခဲ့တော့ နဲနဲ အိပ်ရေးပျက်ပြီး မျက်နှာက ခပ်ချောင်ချောင် ဖြစ်နေသလားပဲ။ ဘွဲ့ ရပြီးတဲ့နောက်မှာ POLICE အကယ်ဒမီက ဆင်းပြီး ကမာရွတ်မြို့ နယ်မှာ တယ၀န်ကျခဲ့တာ ဘာလိုလိုနဲ့6 လတောင်ရှိပြီပဲ။
ဒီနေ့ ညနေပိုင်းကြရင် ထွန်းလင်းခြံလမ်းဘက် ပတ်ကြည့်ဦးမှ။ ခက်တာက ကားခေါင်မိုးပေါ်က မီးရောင် လက်လက်ကို မြင်ရင် ချောင်ခိုပြီး ဆေးလိပ်သောက်သောက်နေတတ်တဲ့ ကောင်လေးတွေက တန်းပြေးရော။ လမ်းလျှောက်ပြီး သွားကြည့်မှပဲ…။
ညီလေး…ခဏ…မင်းမှတ်ပုံတင် ခဏလောက်စစ်ကြည့်ရအောင်….။ လူငယ်က ဂျစ်ကန်ကန်နှင့် ။ ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ။ ကျွန်တော့် အသက် ၁၈ ပြည့်ပြီးပြီဗျ…။ ကောင်းပါပြီ..။ ဒါပေမဲ့ အကို့ ကို ပေးကြည့်ပါ…။ လူငယ်၏ မျက်နှာတွင် “သွားပြီ” ဆိုသည့် အတွေးနှင့် မှတ်ပုံတင်အား ထုတ်ပေးလိုက်ရတော့သည်…။ ညီလေး …မင်း အသက် မပြည့်သေးပဲ ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် အကိုနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ လိုအပ်လိမ့်မယ်…။ မင်းရဲ့ အိမ် PHONE NUMBER ပြောပါ…။ ပြီးတော့ မင်း ဒီဆေးလိပ်ကို ဘယ်ဆိုင်က ရောင်းလိုက်တာလဲ…..။
( …) လမ်းထိပ်က MINI STORE ကပါ…..။
ဆိုင်တာဝန်ခံနဲ့ တွေ့ ချင်ပါတယ်…။ ဘာအတွက်လဲဗျ..?? ကျွန်တော် ဆိုင်ရှင်ပါ…။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် လူကြီးမင်းကို အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးတဲ့ လူငယ်တွေကို ဆေးလိပ်မရောင်းရ ဥပဒေကို ဖောက်ချက်တဲ့ အတွက် အရေးယူ တရားစွဲပါမယ်…။
ရှေ့ နေခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါ ခင်ဗျာ………။
အဘရဲ့ 16 က အခု 11 မှာ လုံးဝ အံမ၀င်ဘူး။
ဟေ့သူငယ် မီးတတို့လောက်ကွာ.. ဟေ့.. မင်းအိတ်ထဲက ဆေးလိပ်ဗူး.. ငါကို တလိပ်လောက်ပေးစမ်းကွာ..
77 ကြီးခင်ဗျာ……စောနေသလားလို့…. u lay gyi က စစ်ထဲ မ၀င်ရသေးဘူးလေ…၀င်ပီးတော့မှ. .အဲဒီ LAW
ထုတ်ပြန်ပေါ့နော….ခုတော့ posts နဲ့ commet လုပ်ပီး အေးအေးလေးနေပါဦးဗျာ…….
လာမယ်လေ။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ လောနေတာလဲ။ ပလောင်တောင်တက်နှေးတာ သူ့ အကြောင်းနဲ့ သူရှိတယ်လေ။ အဲဒီအချိန်ကျရင် ဘွားဆူးနဲ့ဘိုးအိမ်မဲ့တို့ ရဲ့မြေးတွေ အစိမခံရစေအောင် သွန်သင်ထားပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့မသိစိတ်ကိုက negative thinker ဖြစ်နေတော့ ဒါမျိုးတွေက လုပ်ရင် ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမခံယူထားဘူးလေ။ လှောင်မယ်ပြောင်မယ်ရိမယ် ဒီလောက်ပဲ တတ်တော့ ..။
တစ်ခုလောက် မေးပါရစေ။ အပြင်ကို မရောက်ဖူးဘူးလား??? နွားခြေရာခွက်ထဲမှာပဲ မနေနဲ့ နော်… သနားလို့ …။
ဖိုးဂျစ်တော့မသိဘူး၊ ဖွားဆူးကတော့ ဘာဆိုဘာမှ မသိဘူး၊ တောကလာတာလေ။ အမျိုးတွေက သနားလို့ ရန်ကုန်ကိုရောက်တာ။ သူ့ကို နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုပြီး ခေါ်လာတာတဲ့။ လေဆိပ်ရောက်တော့ မျက်လုံးပိတ်ပြီး ကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်၊ တရုပ်တန်းကြတော့ စင်ကာပူ ရောက်ပြီဆိုလို့ မျက်လုံးလေးကလယ်လယ်နဲ့ တွေ့တဲ့ဘုံကျောင်းဝင်ဦးချ၊ အနီးအနားဆိုင်က ရောင်းတဲ့နဂါးရုပ်တွေကို စင်ကာပူ အမှတ်တရ ဆိုပြီး ဝင်ကြည့်တယ်။ တာမွေဘက်ရောက်တော့ မလေးရှားထင်လို့ တွေ့တဲ့ ဗလီတလုံးရှေ့မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်၊ ဘေးနားစတိုးဆိုင်က မလေးရှား ပါတိတ်စတွေကို ဝင်ကြည့်တယ်။ အခုတော့ ဂူဂဲကိုသုံးတတ်သွားလို့ မိန်းမလည်သိန်းကြွယ် ဖြစ်သွားပါပြီ၊ ဒါနဲ့ပဲ ကမ္ဘာဟာရွာကြီးတရွာ ဖြစ်သွားပြီလို့ ထင်နေသူပေါ့။ သနားစရာ အူတူတူလေးပါဗျာ.. ဆုံးမပါ။
အော်…အသိလို့နော်…ကျိတ်ချိုးတော်အမူပါနဲ့….ကိုယ်တော်ကြီးက အထဲ မှာကိုး….အဲဒီမှာ နက်လဲရှိတယ်လား.?
နေပါစေဗျာ….ခြေရာခွက်လေးထဲမှာအေးချမ်းပါတယ်…ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ တံတွေး၊ သလိပ်တွေထဲမှာပျော်
နေတဲ့ ကိုယ်တော်ကြီးထံပါး အခစား မ၀င်ရဲကြောင်းပါ..ဖရောင်း…….ငှဲလျောင်း…ငှဲလျောင်း…..
နောက်ချင်လာပီ..နေနိူင်တော့ဘူးဘဘကြီးရေ..။။…ဘဘကြီးက viedo ထဲသွားပီးလူကြမ်းလုပ်စားပါလား..ဟင်..!
(ခုတော့မမှီ၊ နောက်နှစ်ပေါ့) ..။။..အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်ရမှာ..။။…
ဒီမှာ..သရုပ်ဆောင်ခ က 80/-ကျပ် ဘဲရတာ…မကိုက်ဘူးနော်…။..
စီးကရက်နဲ့ဘီယာ အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်ရောင်းဝ်ာဖြန့်ဖြူးတာက . တပ်မတော်ကိုငွေရှာပေးတဲ့.. ဦးပိုင်ကြီးဖြစ်နေတော့ကာ..။
တော်တော့်ကို ခက်ဦးမယ်ဗျ..။ တပ်မတော်လည်း .. စွမ်းအင်ဖက်က ၀င်ငွေတွေရနေပြီမို့ ..ဒီအလုပ်ရပ်ပစ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်.။ လူမျိုးလူညွှန့်တုံးစေတာတွေကိုး..။
ဒါမျိုးက .. လူတယောက်ချင်းလိုက်ဖမ်း..စစ်ဆေးနေရတာ ..ရဲဝန်ထမ်းစရ်ိတ်သိသိသာသာ တက်စေပါတယ်..။
ရဲခမြာ.. ဒီထက်အရေးကြီးတာတွေ ..တထွေးနဲ့ မဟုတ်လား..။
ယူအက်စ်က ဘယ်လို အစမှာဖြေရှင်းခဲ့သလဲဆိုတော့ … ဆေးလိပ်ထုတ်သူတွေ.. သွင်းတဲ့သူတွေကို … အခွန်မတရား(တကဲ့ကို မတရားးးးး )ကောက်ထည့်တာပဲ..။ နှစ်စဉ်လိုလို ..တက်ပြီးရင်းတက်ရင်းပဲ..။
အဲဒီတော့ .. ဆေးလိပ်ဈေးက .. မူရင်းဈေးထက် ..၄-၅-၁၀ဆမကတက်လာတော့..ဘယ်ကလေး..လူငယ်မှ ၀ယ်မသောက်နိုင်တော့ဘူးလေ..။
သူတို့က ..၀င်ငွေမှ မရှိတာကိုး…။
အော်တိုမစ်တစ်ကို … ဆေးလိပ်မသောက်ဖြစ်ပဲ..ဖြစ်သွားတော့တာ..။
မြန်မာပြည်လည်း.. အဲလို ဥပဒေထုတ်လိုက်ပြီးတာပဲ..။
စီးကရက်..ဆေးပေါ့လိပ်.။ဆေးပြင်းလိပ်… အမြတ်ခွန် ၉၀ရခိုင်နှုန်း..။ ၁၀၀ ကျပ်မြတ်ရင် ..၉၀ကျပ် ..အမြတ်ခွန်ဆောင်စေ..ပေါ့..။
ပိုသေခြာအောင်.. ၅နှစ်အထက် ဆေးလိပ်ထုတ်လုပ်နေသူတွေ.. အခွန်ငွေကို ..၅နှစ်စာအခွန်မပြေ..ကြွေးကျန်ငွေအဖြစ် ပြန်လှန်ကောက်ခံစေ..လုပ်လိုက်ယုံပဲ..။
ဆရာခိုင်ကလည်းဗျာ ရဲကိုသွားပြီး စားပေါက်အသစ် ထွင်ပေးနေပြန်ပါပြီ။ မပူနဲ့ဗျို့ ဒီပုံစံနဲ့သွား နောက်ငါးနှစ်ကြာရင် တေဇတို့၊ ဇေကမ္ဘာတို့၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ သားမြေး၊ အပေါင်းအပါတွေ ဖွင့်တဲ့ ဇိမ်ခန်း၊ ဘိန်းခန်းတွေ မှိုလိုပေါက်လာလိမ့်မယ်။ အသက်မပြည့်သေးသူတွေဝယ်တဲ့ ဆေးလိပ်နေရာမှာ ဘိန်ဖြူတို့ စိတ်ကြွဆေးတို့က အစားထိုးလိမ့်မယ်။ စတော့မဲ့ မဲခိုးလွှတ်တော်ရဲ့ သက်တမ်းငါးနှစ်ကို ထောက်ခံဖို့၊ တခုထဲသော မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး လူတွေကို နှပ်ကြောင်းပေးချင်တဲ့ ပို့စ်ရေးသူ ဆရာဂျီးဆိုသူကိုတော့ အားနာပါရဲ့။
စောတီးဗျို့၊ ရှေ့မှာမန်းလိုက်တာ နာမည်မှားသွားလို့၊ ပို့စ်တင်သူက တပ်မ၇၇နာမည်နဲ့ စစ်သားဗျ။ ဆရာဂျီးရေ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ၊ မန်းတာဆက်သွားတော့ ရှုပ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ကြုံလို့ နအဖစစ်ကောင်တွေကို ပြည်သူ့ခုံရုံးတင်ရင်ကောင်းမလား၊ နိုင်ငံတကာခုံရုံးတင်ရင်ကောင်းမလား။ လျော်ကြေးပေးတဲ့အနေနဲ့ ရေးစရာ အစဖေါ်ပေးထာပါ။
Like လုပ်လို့မရလို့ ဒီနားလေးကနေပီး ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ်
Kai ကိုထောက်ခံသွားတယ်ဗျို့ 
ဦးလေးကြီးခင်ဗျား….တရုတ်လိုရေးထားပါသလားဗျာ…(အစိမခံရစေအောင် ) ..အစိမခံ—ဆိုတာ
ဆရာခိုင်ရေ။ အကြံကောင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက ဘာတွေဘယ်လောက် ဈေးတက်တက် ၀င်ငွေနဲ့ဘယ်လောက်ပဲ ကွာကွာ ငြီးညူရုံက လွဲလို့ဝယ်ယူသုံးစွဲမြဲပါပဲ။ ကြုံလို့ ပြောရရင် ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကိုရီးယားမှာ ကျောင်းတက်နေတာ၊ ကားဂိတ်မှာ ဆေးလိပ်သောက်ပြီး ဒီတိုင်း လွင့်ပစ်လိုက်တာ ရွာပြန်ပို့ လိုက်တယ်။ သူတို့ ဆီမှာ အငြိမ်းစားတွေ အလုပ်မရှိတဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေကို အဲဒီ အလုပ်ပေးထားတယ်။ ကင်မရာ တစ်လုံးနဲ့ ရိုက်ပြီး ငါပစ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းလို့ မရအောင်ကို ဖမ်းတာ။ ဆေးလိပ်က လှိမ့်လို့မဆုံးသေးဘူး ချိုင်းကနေ ဘယ်ညာ နှစ်ဖက်ဆွဲမတော့တာပဲ။ အသက်မပြည့်ပဲ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ လူငယ်တွေ ၊ ဆေးလိပ်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ အကုန်ဖမ်းတာ။ အရက်လဲ အတူတူပဲ။
ပြောပါတရ် … မူတွေကကောင်းပါတရ် … လူတွေကမကောင်းတာလို. … အဟတ် အဟတ် …
ဘယ်သူ.မြေးအရင်ပါမလဲတော့မသိဘူး … အဘမြေးတော့ အရင်ပါမှာ … သေချာတရ် …
ဟိုအရည်မရောင်းရလို.တောင် … မြေတူးစက်နဲ.ကလော်ပုံထောက်တော့ …… ဟဟဟဟ
တစ်ကယ်တန်း ဒီလိုစည်းကမ်းတစ်ကျ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မရ်ဆိုရင် … ကျုပ်တို.က ကြီုဆိုပါတရ် …
ကိုယ့်နိင်ငံ ကောင်းဖို.ပဲလေ … ဟုတ်တရ်မလား ….
ဒါကျုပ်တို.ရဲ. မျှော်လင့်ချက်ပဲလေ … ကျုပ်တို.ဖြစ်စေချင်နေတာ ဒါပဲလေ ….
ရခိုင်ဘုရင်မင်းထီးလို …. ကိုယ်ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းသေချာလိုက်နာ ….
မတော်တဆ … ကိုယ်မှားရင်တောင် … ကိုယ့်လက်ကိုယ်ဖြတ်ရဲံတဲ့သူမျိုးဆိုရင် …
ဘယ်ပြည်သူ/သားတွေက ဘယ်လိုစည်းကမ်းဖောက်ဝံ့မှာလဲ …….
ဘယ်သူမှလဲ အပြစ်ပြောနေတော့မှာမဟုတ်ဘူး …
တစ်နေ.တစ်ခါတောင် ထိုင်ရှိခိုးနေအုံးမှာ …..
တကရ် … တကရ် ….
Like လုပ်လို့မရလို့ ဒီနားလေးကနေပီး ကိုယ့်ထမင်းချိုင့်နဲ့ကိုယ် ကွီးကွီးကိုထပ်မံထောက်ခံသွားတယ် ;)
နာ ရဲ ဝင် ထောက် ခံ ရိုက် ဦး မယ်။:P
အခုလိုအရေမရ အဖတ်မရ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားနိုင်လုနေမယ့်အစား ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ်ညီ ညီမ
ကိုယ့်အလုပ်က၀န်ထမ်း ဆေးလိပ်မသောက်အောင် လူတစ်ဦးကို
ကိုယ်ကို တိုင်ရော ဆေးလိပ်မသောက်ဘဲ နေနိုင်ပါသလား။
သူ့ဘာသူ ဘယ်ကောင်ရောင်းချင်ရောင်းမရောင်းချင်နေ သောက်တဲ့သူမှ
ကဲ အခုကစလို့ ကိုယ့်နီးစပ်ရာတွေကို ဆေးလိပ်မသောက်ချင်အောင်စည်းရုံးဘို့ကြိုးစားကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ကိုပေါက်ရေ နီးစပ်ရာတွေကို စည်းရုံးလိုက်ရလို့ သူတို့ တစ်ကယ်ပြုပြင်မယ် ဆေးလိပ်မသောက်ဘူးဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ … ။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်အတွက် ပီတိဖြစ်စရာပါ ။ သို့သော်လည်း …
လူကြီးမှန်းမသိ ဘာမသိ အပေတေတွေကို ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့ ဘာညာသွားပြောရင် အလကားနေရင်း ကြီးတော်နွားကျောင်းတယ်ဆိုပြီး အဆဲခံရဦးမယ် ။
စေတနာကို ပေတရာချခင်းခံရတာတွေ ခဏခဏဖြစ်တတ်လွန်းလို့ etone တို့ကတော့ ဥပက္ခာပြုထားတယ် … သောက်ချင်တဲ့လူသောက် မသောက်ချင်တဲ့လူမသောက်နဲ့ ပေါ့ ။
အသားလွတ် thumb down တွေချဉ်းပါလား။ မနာလိုမှုနဲ့ပိုတ်ဂိုရေး မုန်းတီးမှုရှိနေပြီထင်တယ်။ အိမ်း….။အိမ်ခွေးတွေ အိမ်ခွေးအချင်းချင်းပဲ ပြန်ကိုက်နေတယ်။ အပြင်ခွေးမြင်ရင် အမြီးလေးဖွက် ရှုးလေး တစ်စပ်စပ်နဲ့ ။ အိမ်း……။
ကိုပေါက်ရေ….အရည်လေးအဖတ်လေးနဲနဲတော့ရမယ်ထင်ပါရဲ့….ငြင်းရခုံရ နဲ့ မျက်စိတွေကျယ်..အိပ်ချင်လဲ ပြေ…
ရီရ ပြုံးရ..စိတ်လဲဆိုးရ..၁၀..လဲရ.နဲ့ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်လေသလဲဗျာ…ဖတ်ရတဲ့သူတွေ အပျင်းပြေ
…posts တွေလဲကောင်းပါ့…..ဗဟုသုတတွေလဲ ကောင်းမှကောင်း..ဒါပေမယ့်….
ဖတ်သူတွေ..ရီရ ပြုံးရတဲ့.ခုလို….commet လေးတွေပါမှလဲကောင်းမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်…..
တပ်မ 77 ဆရာဘဘကြီးရဲ့ comment ထဲက…….. ပိုတ်ဂိုရေး…….ကို ဟောဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး…လို့ပြန်ပြင်ပေးနိူင်
ပါ့မလားခင်ဗျာ….( အမှားလေးပြင်ပေးရတာ ကြောက်ကြောက်နဲ့ပါ….သူက ကိုဂျစ်ပြောသလို အစံမခိ တွေ….
အစိမခံ တွေလုပ်မှာ ကြောက်လွန်းလို့ပါဗျာ )
ဘယ်နေရာက ဘာရာထူးလဲတော့မသိဘူးဗျ စကားပြောရင် အသားလွတ်ကြီးဆဲဆဲမနေပါနဲ့ မြင်ရကြားရတာ ညစ်ညမ်းပါတယ်ဗျာ……………..
ကိုဇစ်ပိုရေ အမှန်ပြင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီစာလုံးကို မရိုက်တတ်လို့ ။